Chipiri, February 2, 2016 9: 19: 31 AM America / Los_Angeles
Mumwe Armati 5 vanotanga pahotera Chirongwa Thailand, Asia, welcome kuti ashanyire hotera iri kuona tepi kwedu.
Armati 541 dzakatevedzana tepi catalouge ndapota tarisa zvinotevera:
Welcome kuna Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, ane kwezvokufuka 5-nyeredzi pahotera yaiva Thailand kuti guru Bangkok. Rakamiswa pamusoro enchanting Chao Phraya River, vose 726 muenzi wedu makamuri showcase unobstructed rwizi maonero.
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers inopawo 28,000 mativi tsoka conferencing uye musangano zvivako, uyewo yokuitira Stylish uye asingakanganwiki zviitiko uye pamichato. Azodya mhuri kana shamwari imwe offour kumaresitorendi, kana kubata kwokurumbidza shuttleboat kuna Bangkok denga chitima kuwana zvakawanda muguta racho guru yokudyira Chiitiko. Two dzisina-Style swimming madziva, ane runyararo kylpylä, Tennis dare, uye akasvibirira tichifungisisa mapindu kukukurudzira kuti unzwe zvakanaka uye nechokwadi chisingakanganwiki kundogara yedu 5-nyeredzi erwizi Bangkok pahotera.